UGinny noGeorgia - Isizathu sempumelelo enkulu yochungechunge lweNetflix | Bezzia
USusana godoy | 06/04/2021 14:00 | Izindaba
Emasontweni ambalwa edlule, i uchungechunge oluthi 'Ginny and Georgia'. Yize mhlawumbe ekuqaleni kungazange kuqale njengenye yezintandokazi ezinkulu ukuthi kube yimpumelelo, kodwa sekuqalile. Esikhathini esifushane kakhulu izibeke phakathi kokubukwa kakhulu endaweni yesikhulumi.
Ngakho-ke, inezinhlamvu eziningi ezenziwa uchungechunge lwakho olusha oluthandayo. Usuke wakubona kodwa? Uma kunjalo, khona-ke uzokwazi kahle lokhu engikhuluma ngakho futhi uma kungenjalo, usengakuthola bese uzama. Isitayela esihlanyisayo sesakhiwo kodwa esinamagwegwe amaningi alengayo.
1 Ubudlelwano umama omncane kakhulu anabo nezingane zakhe
2 Indaba ngemuva kukamama onezimfihlo
3 Ubusha nezinkinga zako
4 Thanda ubudlelwano 'eGinny naseGeorgia'
Ubudlelwano umama omncane kakhulu anabo nezingane zakhe
Iqiniso yilokho ubudlelwano umama, uGeorgia, anabo nezingane zakhe yinto ephuma ngokushesha nje uma uthi nhlá. Njenganoma imuphi umama noma ubaba, ubanikela ngakho konke kodwa kuyiqiniso ukuthi uyaqhubeka. Ngoba lobo budlelwane babangani esibufunayo sonke nomama noma amadodakazi ethu, manje bubonakala ngathi buphila. Ngaphezu kwalokho, kwesinye isikhathi izinqumo zendodakazi zithinta abantu abadala kakhulu, lapho kuvame ukuphikisana. Sizoyithola leyo nkululeko ephelele mayelana nobungane nobudlelwano bomndeni, into esithanda ukuyibona esiqeshini sokuqala, yize konke lokhu kuzoguquka. Njengoba ngemuva kwalobu budlelwane kunezimfihlo ezingaphezu kwezimnyama nezinzima.
Indaba ngemuva kukamama onezimfihlo
Konke kunephuzu lokuhlangana ngakho-ke, ebudlelwaneni bukamama nendodakazi, futhi. Lokhu kusho ukuthi uma ubudlelwano bunjalo, buzoba ngokuthize. Mhlawumbe ngoba umama wayenendodakazi yakhe isencane kakhulu, edlula emidlalweni ethile yomndeni eyayimlungisa esendleleni. Ngakho-ke, lapho indodakazi uGinny ithola lokho okufihlwa ngunina, ayimxoleli noma kubonakala sengathi kunjalo. Kepha kuyiqiniso ukuthi kusenokuningi okumele ukwazi ukuze ukuqonde. Izimfihlo zizovezwa ngendlela yokweqa ngesikhathi. Ukuze ngale ndlela, sikwazi ukuqonda impikiswano uqobo kangcono kakhulu.
Ubusha nezinkinga zako
Ngaphezu kwezimfihlo nobudlelwano phakathi kukamama nendodakazi, uchungechunge lweNetflix i-'Ginny neGeorgia 'lukhona nemidlalo yentsha. Ubudlelwano bokuqala bezocansi, ukuthanda okuzayo nokudlulayo kanye nenani lobungane nokuphazamiseka okuthile. Kubukeka sengathi umbango nokuvuthwa nakho kushayisana ngokuphelele ochungechungeni olufana nalolu. Ngakho-ke i-priori ingakhulunywa kahle ngochungechunge lwentsha, yize okwamanje kuhlanganisa okuningi kakhulu kunalokho esingakucabanga. Kukhona ukukhuluma ngokufana okuthile nolunye lochungechunge ukuthi esikhathini esedlule kube nempumelelo enkulu futhi akekho omunye ngaphandle 'kweGilmore Girls'.
Thanda ubudlelwano 'eGinny naseGeorgia'
Ngoba akuyona yonke into ebizoba idrama ku-'Ginny naseGeorgia ', ibuye ibe nokuthinta kwamahlaya futhi ithande nezindikimba. Okuthile okugqagqana phakathi kukamama nendodakazi, ngakunye kunekusasa elingaqinisekile. Yize kuliqiniso ukuthi kwesinye isikhathi singabuza ukuthi indodakazi ivuthwe kakhulu kunonina. Ukuwa othandweni kanye nobudlelwano bokuqala bezocansi ngamanye amaphuzu abalulekile. Izihloko ezidlalwa ngemvelo ephelele nezisisiza ukuba siqonde uhlamvu ngalunye kancane. Ngakho-ke ngemuva kokujabulela isizini yokuqala, umbuzo obuzwa yiwo wonke umuntu uthi: Ngabe iNetflix izovuselela 'uGinny neGeorgia' isizini yesibili? Nginesiqiniseko sokuthi ngempumelelo esiyitholayo, sizokwazi okuthile okuhle kungekudala.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » Isizathu sempumelelo yochungechunge oluthi 'Ginny and Georgia' on Netflix